Jacaylka, Galmada, Internetka iyo Sharciga - Hay'adda Abaalmarinta Reward
Bogga ugu weyn Jacayl, Galmo, Internetka iyo Sharciga
Jacaylka, galmada, internetka iyo sharciguba waxay ku falgalikaraan siyaabo isku dhafan. Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta (Reward Foundation) ayaa kaa caawin karta inaad fahamto waxa sharcigu uga dhigan yahay adiga iyo qoyskaaga. Halkan waxaa ah hadal xiiso leh oo TEDx ah, Galmada, Filimada iyo Ragga waxaa qoray borofisar Mareykan ah iyo hooyo, Warren Binford oo ku biiraya dhibcaha.
Tiknoolajiyada ayaa abuuraya sawirada iyo gudbinta sawirrada galmada ee la heli karo qof kasta oo casriga ah, oo ay ku jiraan ilmo kasta. Kordhinta warbixinta dembiyada galmada iyo habka 'dulqaad la'aanta' ee booliska iyo adeegga dacwad-qaadiddu waxay keeneen in tirada kiisaska la xukumay. Xad-gudubka galmada ee caruurta-ku-dhalashada ayaa si gaar ah u sarreeya.
UK gudaheeda, qof haysta sawirrada galmada ee carruurta (qofkasta oo sanado 18 ah) waxaa lagu soo oogi karaa dembi galmo. Tani waxaa ka mid ah hal dhinac oo ka mid ah shaxanka, dadka waaweyn waxay ku dhiirigeliyeen in ay raadsadaan galmo xiriir la leh caruurta illaa dhalinyarada oo samaynaya oo u diraya qaawan ama qaawan 'qarsoon' oo leh danaha jacaylka suurtagal ah, iyo haysashada sawiradaas.
Qaybtaan sharciga ku saabsan Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta waxay sahamineysaa arrimaha soo socda:
Qorista hoosta sharciga ee England iyo Wales
Waxaan sidoo kale bixinnaa kheyraadyo kala duwan si aan u taageerno fahamkaaga arrimahan.